मञ्जु पोखरेलसँग विवाह गरेपछि मनोज गजुरेलले भावुक बन्दै किन यसो भने ? - Nepalese Times
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 51 मिनेट अघि
मञ्जु पोखरेलसँग विवाह गरेपछि मनोज गजुरेलले भावुक बन्दै किन यसो भने ?
नेप्लिज संवाददाता २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:३१ (1 हप्ता अघि) २९३ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । कलाकार मनोज गजुरेलले मन्जु पोखरेलसँग विवाह गरेका छन् ।
उनले सोमबार डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा गएर विवाह गरेका उनी स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
‘स–परिवार मानव सेवा आश्रम (कौशलटार)मा बुवाआमालाई खाना खुवाएर र खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ,’ मनोजले भनेका छन्।
मञ्जु न्याय सेवाकी कर्मचारी हुन्। मनोजले पहिलो पत्नी मीरा ढकालसँग ४ वर्षअघि सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए।
मञ्जुसँग विवाह गरेलगत्तै मनोजले सामाजिक संजालमा यस्तो भावुक स्टाटस लेखेका छन्ः
जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ वर्ष पहिले कानुनी रुपमा टुंगिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ।
त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ।
जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महशुस हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैगरी मेरा बाबु-नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा संवेदनशिल हुनुपनि जरुरी थियो।
यी दुबै अवस्थामा साथ दिने सहयात्रीको अभाव समयक्रममा खड्किँदै आयो। बाबुनानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो।
एकअर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बाचा गर्यौं। अगाडि आइपर्ने सुस्खरदुस्खुलाई मिलेर स्वीकार र प्रतिकार गर्ने संकल्प लियौं। हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबुनानीहरुको सुझाव र सहमतिले पनि ठूलो मद्दत गर्यो।
सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरुलाई सादर अनुरोध छ( कृपया मेरो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखि दिनुहोला। मन्जुजीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने अमर्यादित कथा नकथिदिनुहोला। हाम्रा सन्तानको सुख र शान्तिका लागि परपीडक ट्रोल र भिडियो नबनाईदिनु होला ।
कसैको निजी जीवनका बारेमा कपोकल्पित समाचार बनाउने, असम्बन्धित मान्छेसँग नाम जोड्ने, हाम्रो विगतको जीवन, वर्तमानको विवाह तथा भविष्यको योजनाका बारेमा अनुमानकारिता नगर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु।
त्यसैगरी हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत मामिलाका बारेमा अनावश्यक सामग्री बनाउने कानुनी, व्यवहारिक र सामाजिक अनुमति कसैलाई नभएको कुरापनि जोडदार रुपमा जाहेर गर्दछु।
विगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहारका कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आघातबाट गुज्रनु परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गिजोल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव छ( कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई पनि महशुस गर्नुहोला।
अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्ण आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउँछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवको दर्शन गर्यौँ।
त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ विवाह सम्पन्न गर्यौँ। अनि, सपरिवार मानव सेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएररखाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ ।
परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशीर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद। नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरुन्। बडादशैँको हार्दिक शुभकामना ।